The Guideline From Semalt - Nzira Yokusunungura Nayo Website Yenyu Kubva Kushandura Hondo
Pane zvakawanda zvekunyorwa kwekombiyuta kuenderera mberi pawebhu. Somugumisiro, vanhu vanoda kugaraunoziva nezvevanhu ava. Kune munhu ane webhusaiti, kuchengeteka kwe e-commerce kushandiswa pamwe neyevatengi vako vari mune yakomaoko. Vanoshungurudza vanoumba hwaro hwekutsvaga kwekutsvaga, mapeji e-phishing pamwe nekusiyana malware hacks zvakadai sokushandisa Trojans iri mu emailattachments.
Kazhinji, vanotya vanoona mawebsite nokuda kwezvikonzero zvakawanda. Vanogona kuva kubva kumupikiswikurutivi, kutsvaga kuunza nzvimbo yako pasi - rehvide ladustamine. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, vatengesi vanogona kunge vari vanhu vari kutsvaga mashoko ega ega sekunyorwa kwemasipi emaimerikana kunyange ruzivo rwekadhi rechikwereti. Kune mhando dzakawanda dzehacks, dzakawanda dzacho dzinosangana nekuita kuti mutambudzi anotambura.
Jack Miller, nyanzvi inotungamirira kubva Semalt ,inokurukura zvimwe zvemashoko anogona kukuchengetedza kure nevashambadzi ava:
1. Shandisa passwords zvakachengeteka.
Sekutonga kwewebsite, password yako ine basa guru rekutungamira mukuitanechokwadi kuti nzvimbo yose yakachengeteka. Zvinyorwa zvinyorwa zvakajeka se 12345 hazvina kuchengetedzwa uye zvinogona kuwira muedzo uye kutadza kukuvadza. Mune imwemamiriro ezvinhu, haufaniri kushandisa mapepa emafiro akajeka. Izwi rakafanana nezuva rokuzvarwa kana zita remwana harina kuchengetwa zvakakwana. Inofanira kuvashoko rakaoma shanduko, kusanganisa marudzi akasiyana evanhu vakasiyana-siyana..Iwe unofanirwawo kuva nechokwadi chokuti mamwe mapato anoshandisamawebsite akachengetedza pasi mapepa zvakare.
2. Shandisa HTTPS.
Kushandisa kuchengetedzwa kwekuchengeteka kunogona kureva zvakanakisisa zvewebsite yako. Semuyenzaniso,mawebsite ane HTTPS yomuiti wekutambira ane ruzivo pane izvo zvisingaiti. Somugumisiro, kuchengeteka kwewebsite yako uyewoiyo yevashandi vako inonyanya kuvimba nekutora kwako chirongwa. Uyezve, vanhu vanobatsirwa nekushandiswa kwemashoko aya vanoguma vachigadzirisamawebhusayithi anonyanya kutyisa haagoni kupinda.
3. Iva neruzivo nemashiripiti.
Kudzingirira kuve chikamu chezuva redu muupenyu. Vanhu vazhinji vanopedza zvimwenguva yakawanda yenguva iri paIndaneti inotarisana nehuwandu hwekuedza. Mamiriro acho ezvinhu anotowedzera kune avo vanomhanya internet yakasiyanamitemo yakadai semakwikwi kune e-commerce website. Hackers inogona kutyisa webhusaiti uye kuburutsa zvimwe zvezvinhu zvinokosha zvakadai sekushanda.Your Search Engine Optimization (SEO) miitiro inogona kukurumidza kuva chinhu nekuda kwezvakanaka, kubudirira hacks. Somugumisiro, kuchengeteka kwakowebhusaiti uye iyo yekuchengeteka kwemutengi wako iri mumaoko ako sewe mutongi weyo site. Iwe unogona kushandisa zano iri mumitemo iyi yekuitaiwe webhusaiti yako yakachengeteka, bullet uchapupu hunopesana nevashambadzi.